Zvakanakira Kuvaka Kambani Kiredhiti - Tora Bhizinesi Chikwereti
Makambani Akabatanidzwa anopa yakanyanya kuwanda Corporate Chikwereti Kuvaka chirongwa iyo yakagadzirirwa mabhizinesi chaiwo anoita bhizinesi rechokwadi zviitiko. Corporate Chikwereti chishandiso chine simba kune muzvinabhizimusi uye muridzi webhizinesi diki. Iwe unogona kuona mabhenefiti mumwedzi, pane makore, kana iwe ukamisa bhizinesi chikwereti chimiro kuburikidza neMakambani Akabatanidzwa. Heano mamwe eapo mapoinzi ekufunga nezvekushandisa yedu Chikwereti Kuvaka Chirongwa:
Kiredhiti Kiredhiti inoparadzanisa bhizinesi uye wega chikwereti uye inosimbisa iyo yekambani chifukidziro chinopihwa nekubatanidzwa
Vatengi vedu vanowanzo gamuchira bhizinesi chikwereti chiyero che 75-80 kana zvirinani, uye vatengi vanogona kupedzisa chirongwa ichi mumazuva 90-150
Isu tinopa vatengi vedu mukana wekuwana kumakambani anopa kambani yako kiredhiti. Tine chiuru chemakambani mune yedu bhizinesi chikwereti chirongwa chinopa kiredhiti uye yakavhurika mitsara yechikwereti pasina kushandisa kwega garandi kana wega chikwereti cheki
Vazhinji vevatengi vedu vanogashira "Retail Kiredhiti Kadhi" yekushandisa pasi pekambani yavo kana kambani isina yavo wega cheki macheki
Kuvaka kambani kiredhiti kunogona kuvhura yakawanda mikova yekumhanyisa rako bhizinesi, kuwana zvikwereti uye maorease, mukati memari kugona kwesangano rako, uye izvi zvese zvinogona kuwanikwa pasina kufumura rako pachako chikwereti chimiro
Vazhinji vevatengi vedu vanoona yakakwira yekubudirira mwero nechirongwa chedu uye vanokwanisa kutenga / kubhadharisa mota dzemakambani, michina yemakomputa uye zvimwe zvinhu zvebhizinesi ravo, yakapihwa mari pasi pesangano ravo, nekukurumidza
Vakwegura Masherufu Makambani uye Makambani vane imwe kukosha kune mamwe marudzi emabhizimusi uye zvinangwa zvinoda kuti bhizinesi rive rakagadzwa kwemakore - Makambani Akabatanidzwa ane sarudzo yakakura kwazvo Shelf Corporations uye Aged Makambani ane Akasimbiswa Chikwereti naizvo.
Chirongwa chega chega chebhizinesi rechikwereti chinouya ne100% Performance Guarantee, iyo inotaura kuti mutengi achagamuchira CHIMWE CHOKWADI kana tikakundikana kuvaka yako yemakambani nhoroondo yechikwereti. Sezvingatarisirwa, iyo garandi inoenderana newe pakutevera rairo yemudzidzisi wako wechikwereti. Uku kuedza kwechikwata uye vatengi vedu vanotora chikamu muchirongwa chekuvaka chikwereti.
Kune akatiwandei mazinga ebasa kusarudza kubva. Ndokumbirawo kuti muverenge iwo mafaera pazasi kuti muone chikamu chesevhisi chamungafarire:
Kuwedzera bhizinesi rake
Borrowing pasina vimbiso yemunhu
Chikwereti chitsva profile pasi pekambani
Vaviri vevatengi vedu muFlorida vaida kutanga kambani yebhazi yechikoro ku
takura vana kubva kumba kuenda kuzvikoro zvakazvimiririra munzvimbo iyi. Ivo vaibata nesu uye isu takavanyoresa ivo muchirongwa chedu kutanga bhizinesi kiredhiti. Takakwanisa kuwana $ 450,000 mumari yekutenga mabhazi echikoro aaida kutanga bhizinesi ravo. Iye zvino vane bhizinesi rinobatsira kwazvo nekuda kwekutanga-up capital yatakakwanisa kuvawanira nekutevera chirongwa chedu.
Mutengi muSpokane, Washington aida kuwedzera bhizinesi rake rekuvandudza zvivakwa. Akashaiwa zviwanikwa zvekutenga michina yaidiwa. Akafadzwa kwazvo nechirongwa chedu nerutsigiro rwaakagamuchira. Akashandisa chirongwa chedu chekuvaka chikwereti chekambani kuti awane madhora mazana matanhatu nemazana mashanu ezviuru mumotokari nemidziyo yekuvaka. Mari yake yechikwereti yemidziyo yake yave chikamu cheaimboenda apo aifanira kuhaya basa kune mamwe makambani. Ane mari yakawanda muhomwe yake pese paanokudziridza imba.
Kukwereta Pasina Zvivimbiso zveMunhu
Izvo zvakakosha kutevedzera mutemo wegoridhe uye kubata mukweretesi nenzira iwe
ungade kurapwa kana iwe uri ivo. Shingairira shanda kuti bhizinesi rako rikure zvakanyanya uye nekuwedzera purofiti uye dzorera kune vanhu vaive nekutenda zvakakwana mubhizinesi rako kuti vawedzere chikwereti. Nekudaro, dzimwe nguva mamiriro ezvinhu anoitika uko kubhadhara kuri kwakaoma. Muchiitiko chisingawanzoitika kuti izvi zvaizoitika, kiredhiti yekambani inokanganisika uye yako wega kiredhiti inogona kusiiwa kunze kweiyo equation, ichisiya yako wega kiredhiti mu-hunyanzvi kana kusinga wedzera chakaipa kune yako yega mbiri.
Corporate Kiredhiti seimwe Imwe kune Yega Chikwereti
Zvinhu zvinoitika. Nokurambana, kurasikirwa nebasa kana tsika dzemari dzinoda
kugadzirisa, dzimwe nguva kiredhiti wega haisi izvo izvo munhu zvaangade. Nekudaro, iwe unogona kupukuta iyo slate yakachena uye kutanga kutsva pasi pekambani. Vaka chikwereti chayo uye uwane chikwereti pasi pemunhu (kambani) yaunodzora. Nenzira iyi, iwe unozogona kutenga izvo zvinhu zvaunoda zvebhizinesi rako, mukati mechikonzero, pasina yapfuura yako pachako kiredhiti zvinetswa zvinopinda munzira yako.